Udele na elu mmiri → Uwe na-arụ ọrụ • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Baa Uru ma adaba kamizelki bụ ihe ngwọta zuru oke maka oge niile. Ọdịdị ha na-enye ha ohere ijikọ halves ke ndaeyo ye sweatshirts n'oge oyi. Anyị na-enye gị uwe ọrụ na ịdọ aka ná ntị vests ihe eji eme ihe di elu.
Uwe na-enweghị aka nyetụ ihe mkpuchi okpomoku, nye nnwere onwe ijegharị, na ekele maka obere akpa, ha na-enye gị ohere iwere ihe ndị dị mkpa. Ihe omume a bara uru na-eme ka ọ bụrụ uwe ndị ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji akpọrọ ihe.
Anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ nke ụdị si AOnye Ozi, Stedman, Reis na Leber & Hollman. A dịgasị iche iche nke agba, nha na ọtụtụ Njirimara-eme ka ojiji nke vests-ewu ewu dị ka uwe, kamakwa onwe uwe.
Maka ndozigharị na ndị na-ewu ụlọ, anyị na-akwado vest nwere ọtụtụ akpa, ọkachasị uru maka ịchekwa obere ihe. Uwe ndị ahụ na-ejigide oge ha ogologo oge n'ihi iji ihe eji eme ihe dị elu.
Emere ngwaahịa a, n'etiti ndị ọzọ ejiri akwa na polyester mee ụfọdụ, nwekwara ụfọdụ mmezi ọzọ. Maka ndị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị egwu, anyị na-enye uwe nchekwa na agba ịdọ aka na ntị yana ihe ndị na-egosipụta.
Uwe mkpuchi ndị a bụ uwe nchekwa ọkachamara nke na-eme ka ọhụhụ pụta. Ọzọkwa, teepu na-egosipụta atụgharị ahụ na-ebute ọhụụ kachasị mma n'ọnọdụ ihu igwe siri ike. A na-eji asọmpi eme ihe n'etiti ndị ọrụ aka, ndị nnọchi anya nke ọrụ okporo ụzọ, kamakwa n'etiti ndị egwuregwu egwuregwu, ndị sonyere na njem a, ndị njem nleta na ụmụaka ụlọ akwụkwọ na ndị ntorobịa.
Ngwaahịa anyị na-emezu ụkpụrụ iwu chọrọ. Mgbe ị na-ahọrọ akwa, ọ dị mkpa iji dozie ya na ogo gị, dịka akara ngosi kwesịrị ịdị na ọkwa ọkụ ọkụ ụgbọ ala. Ọdịdị na-adịghị mma ga-eme ka arụ ọrụ pere mpe n'ihi ngbanwe nke ihe ndị na-egosipụta.
Ugbo ala EU na-achịkwa vis visti ndị anya vis 471: 2003, nke na-egosipụta oke atọ nke visibiliti:
1, jiri ogo kachasị dị nro, na-eji naanị n'okporo ụzọ,
2, nke nwere oke ọhụụ, na-egbo mkpa nke uwe mkpuchi,
3, akwa visibiliti kachasị elu nwere ọtụtụ ọnya na-egosipụta nke nwere obosara pere mpe nke 5 cm.
N’ụlọ ahịa anyị, anyị na-enye akwa dị elu nke abụọ dị mma maka ojiji n’ebe ọrụ.
Uwe na-enweghị aka
Anyị nwere tank n'elu ụlọ ọrụ dịka Adler na Leber & Hollman.
Anyị na-enye ụdị airy a raara nye tumadi maka oge opupu ihe ubi na ọkọchị yana ụdị mkpuchi ejiri rụọ n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Dabere na imewe ahụ, enwere nsụgharị nwere ọtụtụ akpa iji họrọ, na-akwado ọrụ nke, dịka ọmụmaatụ, ndị ọkpọ ma ọ bụ ndị ọkụ eletrik. Gbọ mmiri tankị zuru oke maka ihe omume kwa ụbọchị, na-enyere aka ịnwe ọkụ. Ejiri agba dị, gụnyere camo, na-enye gị ohere ịgbanwe ha n'ọnọdụ na mmasị mmadụ n'otu n'otu, dịka maka ndị oke ọhịa ma ọ bụ ndị ọkụ azụ.
A na-eji akwa ndị nwere agba agba agba nwere akwa dị elu, ọkachasị nwere akwa mpụta polyester nke na-egbochi ifufe ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ọtụtụ ụdị nwere akwa mkpuchi maka nchekwa ka mma site na oyi.
Uwe na-enweghị aka Mbipụta bụ nhọrọ a na-ahụkarị maka ịka akara. N'iburu nke a n'uche, tụlee usoro obibi akwụkwọ dị elu nke na-eguzogide ọgwụ na mmebi, ụcha agba na akwa okpomọkụ na-asacha. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ya maka ịhazi onwe ya ihe mkpuchi kọmputa. Anyị na-agba gị ume ka ị gaa na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị www.pm.com.pl ma ọ bụ na Allegro "PRODUCER-BHP".
n'elu tank maka ọrụuwe ọrụtank n'elu na logotank n'elu na-ebipụtauwe ụmụ nwanyị na-arụ ọrụvest ụzọuwe ụmụ nwokeuwe nchebeụmụ nwoke mkpuchi ụmụ nwanyịuwe mkpuchi na-arụ ọrụụmụ nwoke mkpuchi ụmụ nwanyịụdị uwe na-egosipụtavest ndị ọrụvests Allegro na-arụ ọrụvests ọrụ oge ọkọchịuwe mkpuchi na-arụ ọrụụdị uwe na-egosipụtawork vests olxvests na-arụ ọrụ na mbipụtauwe ọrụ oyivest ndị ọrụuwe ndị ọrụ